Hiran State - News: WAR DEG DEG AH:Gudomiyaha baarlamaanka oo Addis Ababa ka degay, iyo m/weynaha Ugandha oo 10 maalomood u qabtay inuu xilka ka tago Farmaajo.
WAR DEG DEG AH:Gudomiyaha baarlamaanka oo Addis Ababa ka degay, iyo m/weynaha Ugandha oo 10 maalomood u qabtay inuu xilka ka tago Farmaajo.
Addis Ababa:(HS)-Gudoomiyaha baarlamaanka Shariif Hasan oo saacad ka hor gaaray Addis Ababa, Halka Madaxweynaha Ugandha maanta ku hanjabay hadii R/wasaaraha Somaliya isku casili waayo 10 maalmood oo ay gudoomiaha baarlamaanka iyo madaxweynah ay la imaanwaayaan xal midka hada jira ka duwan au doorashada ka dhici doono bisah 8aad Kampala.
Gudoomiyaha baarlamaanka Shariif Hasan ayaa waqti dhaw gaaray caasimada dalka Ethiopia waxaana warbixin dheer ka soo dyraarin doonaa safarka gudoomiyaha baarlamaanka oo sida warar horudhac ah ay sheegayaan in uu cadaadis kala kulmay mudanayaal badan iyo beesha caalamka oo hada baarintaan xoogan ku sameysay qaabkii loo maareeyey shirkii Kampala ee la donrayey in R/wasaare Farmaajo shaqadiisa looga ceyriyo isagoo aysan jirin wax loo cuskanayo oo xitaa lagu ceyrin karo.
Wariyaheena Addis Ababa ayaa waxbixin naga soo siin doona saacadaha soo socoda safarka gudoomiyaha inkasta oo ay adag tahay in saxaafada loo ogolaado aragtidiisa.
dhinaca kale wararkii ugu danbeeyey ka yimaada madaxweynaha Ugandha ayaa sheegaya inuu mudo 10 maalmood ah u qabtay inuu isku casilo R/wasaaraha isagu ay taageersan yahiin shacabkiisu waa Farmaajee isagoona sheegay hadii ay masuuliyiinta dowlada sida Madaxweynaha Somaliya iyo gudoomiyaha baarlamaanka la imaanwaayaan ficil midka hada muuqda ka duwan inuu iclaamin doono shirweyne ka dhaca bisha 8aad wadankiisa, waayaabe ma isagaa iska leh talada Somaliya? sow ma oga madaxweynah Ugandha yeysanba sidii la rabay u shaqeyne in aanu leenahay baarlamaan Somaliyeed oo go,aan ka gaari kara xaaladan cakiran.
Madaxweynaha Ugandha ayaa waxaa mowqifkiisa bedelay war bixin xaleyto uga timid Mogdisho kedib markii saraakiisha ciidankiisa ee Mogdisho jooga u sheegeen in R/wasaaraha Somaliya heysto shacabiyad badan oo aysan xitaa awood u laheyn iney xakameeyaan mudaharaadyada Mogdisho hadii aysan dadka tooganeyn.
Dhinaca kale mudaharaadyadii maalin dhaweyd dhacay ayaa waxaa abaabulkooda qeyb weyn ku lahaa wasiirkii geeriyooda ee arimaha gudaha inkastoo marka shacuurta dadka la fiiriyo waqti kasta la abaabuli karo taasi oo hadii ay maanta amaba berito banaanbaxyo aan rabshado wadan ka dhacaan dal iyo dibad ay wax badan soo deg degi doonaan hada waxaanu mareynaa Farmaajo ha is casilee waxkaweyn ayaa la filan doonaa.
Madaxweynaha Somaliya ayaa lagu wadaa inuu maanta amaba berito xoojiyo hadalka madaxweynaha Ugandha si meesha looga saaro Farmaajo
La soco warakeena dane
· admin on June 12 2011 13:09:30 · 0 Comments · 1726 Reads ·
14,569,756 unique visits